Afeef & Xuquuqda qoraalka | SABAB (Isbahaysiga ka dhanka ah waxbarashada galmada ee aan badbaadada lahayn)
Ku soo dhowow boggayaga internetka. Haddii aad sii wado raadinta iyo adeegsiga degelkan waxaad oggolaaneysaa inaad adeecdo oo ay kugu xidhnaan doonto qaansheeggan soo socda, oo ay weheliso shuruudaha iyo shuruudaha adeegsiga.
Macluumaadka ku jira degelkan waxaa loogu talagalay ujeeddooyinka guud ee macluumaadka oo keliya waxaana soo diyaariyey stopsafeschools.com. In kasta oo aan ku dadaaleyno in macluumaadka aan cusbooneysiino oo aan saxno, ma sameyno wax matalaya ama dammaanad qaad nooc kasta ah, muuji ama tilmaam ah, ku saabsan dhameystir, saxnaan, isku halleyn, ku habboonaanta ama helitaanka iyadoo la tixgelinayo websaydhka ama macluumaadka, alaabada, adeegyada , ama sawirada laxiriira ee kujira websaydhka ujeedkasta. Ku tiirsanaan kasta oo aad geliso macluumaadka noocaas ah markaa si adag ayey naftaada ugu jirtaa khatarta. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso su'aalo aad adigu iska leedahay si aad u go'aamiso haddii macluumaadka ama alaabooyinka ay ku habboon yihiin isticmaalkaaga la damacsan yahay.
Websaydhku wuxuu leeyahay xarun Tarjumid Luqadeed. Masuuliyad kama saarna saxnaanta turjumaad kasta.
Haddii ay dhacdo jirin waxaan noqon doonaa masuul ka ah wixii khasaaro ama waxyeello kasta oo ay ku jiraan xad la'aan, khasaaro ama waxyeello aan toos ahayn ama dhasha, ama khasaaro ama waxyeello kasta oo wax alla wixii ka timi khasaaro xogta ama faa'iidada ka soo shaac baxa, ama lug ku leh, isticmaalka website this .
Adigoo adeegsanaya websaydhkan waxaad kuxiran kartaa boggaga kale ee gacanta aan ku jirin stopsafeschools.com. Annagu awood uma lihin xakamaynta nooca, waxa ku jira iyo helitaanka shabakadahaas. Ku darista xiriiriyaasha midkoodna macnaheedu maahan soo-jeedin ama taageereysa fikradaha lagu soo bandhigay gudaha.
Dadaal kasta waxaa lagu sameeyaa sidii loo ilaalin lahaa websaydhka oo si habsami leh u socdaan. Si kastaba ha noqotee, stopsafeschools.com mas'uuliyad kama saarna, mas'uulna kama noqon doono, mareegtada oo si ku-meelgaar ah loo heli karin sababo la xiriira arrimo farsamo oo ka baxsan maamulkeenna.
Websaydhkan iyo waxa ku jira ayaa ah daabacaadda CAUSE (Isbahaysiga ka dhanka ah waxbarashada galmada ee aaminka ah) - © 2018. Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya
Dib-u-qaybin ama soo saaritaan qayb ama dhammaan waxyaabaha ku jira qaab kasta waa ka mamnuuc wixii aan ahayn kuwa soo socda. Waad u daabacan kartaa ama kala soo bixi kartaa waxyaabaha kujira diskka adag ee deegaankaaga si aad u isticmaasho shaqsi ahaaneed iyo ganacsi ahaanba. Waad nuqul ka qaadan kartaa nuxurka qaar ka mid ah qeybaha seddexaad oo keliya shaqsiyadooda, laakiin kaliya haddii aad qirato websaydhka inuu yahay isha maaddada.
Ma awoodi doontid, marka laga reebo ogolaanshahayaga qoraalka ah ee aan helno, qaybinno ama ganacsi ahaan uga faa'iideysan kartid waxa ku jira. Ma gudbin kartid ama kuma keydin kartid degel kasta ama qaab kale oo nidaamka dib u soo celinta elektiroonigga ah.
Xarunta tarjumaadda Google ee Bogga ayaa soo saarta tarjumaad ku saleysan mashiinnada tirakoobka oo aan lagu hayn nidaamkeenna. Macluumaad, wakiiladeena, iyo shati bixyayaasheena ma sameynayaan wax matali ah ama dammaanad qaad ah oo ku saabsan saxnaanta, dhameystirka, ama ku habboonaanta ujeeddooyinka tarjumidda. Asluubtu mas'uul kama noqon doonto wixii khasaare ah, ficillo, sheegasho, dacwad-qaadid, dalabyo, kharashyo, kharash bixinno, iyo qaan-sheegyo kale wixii ama si kasta oo ku dhaca oo toos ama si aan toos ahayn ula xiriira, la xiriira ama ka soo baxa adeegsiga tarjumaadda. . Adeegsiga astaantan waxay ku xiran tahay Shuruudahan.